कोरोना रोकथाम प्रयास: देशैभर सात हजार शैया थप गर्दै सरकार - Nepaliraibar
यस्तो गल्ती अब इतिहासमा कुनै कम्युनिस्टले गर्ने छैन् ओली नै अन्तिम हो : घनश्याम भुसाल
कोरोना रोकथाम प्रयास: देशैभर सात हजार शैया थप गर्दै सरकार
काठमाडौं । सरकारले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि करिब सात हजार शैया थप गर्ने भएको छ।
तीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका ६ अस्पतालमा आजैदेखि एक हजार शैया थप गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले सरकारी र निजी अस्पतालमा थप सात हजार शैया थप्न थालिएको जानकारी दिए।
आज मात्रै सात हजार २११ सङ्क्रमित भएको र २७ जनाको निधन भएको छ। उनका अनुसार नेपाल प्रहरी अस्पतालमा ३५०, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, पिपुल्स डेन्टल अस्पताल र सुरेश वाग्ले स्मृति क्यान्सर अस्पतालमा सयरसय तथा काठमाडौँ मेडिकल कलेज र नेपाल मेडिकल कलेजमा १५०/१५० शैया थप गरिनेछ।
ती अस्पतालमा शैया थप गर्न मन्त्रालयले यसअघि नै सम्झौता गरिसकेको थियो। सहप्रवक्ता डा अधिकारीले काठमाडौं मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज र किष्ट मेडिकल कलेजमा ४००र४०० दरका एक हजार २०० शैया चाँडै बन्ने बताए।
सामाजिक सेवा केन्द्र दैलेखको अध्यक्षमा थापा निर्विरोध निर्वाचित
ओलीलाई लक्षित गर्दै नेपालले भने,: अहंकारी व्यक्ति अवश्य पतन हुन्छ
सरकार ! हामी भोकै छौ, राहत कहिले दिन्छौ ?
खाली पेटमा जिरा पानी पिउनूस् यस्ता छन् फाइदा